Umaka: ukuzibandakanya kwe-twitter | Martech Zone
Umaka: ukuzibandakanya kwe-twitter
NgoLwesine, ngoMashi 31, 2016 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Kunenqwaba yemithombo yezokuxhumana kanye nezazi zobuchwepheshe laphaya ezikhuluma ngokushona kweTwitter. Ngizothembeka ukuthi, yize kunezinxushunxushu zebhizinisi, ngisathola inani elimangalisayo endaweni yesikhulumi. Uma othile ovela ku-Twitter efunda lokhu, nakhu engingakwenza ngokushesha ukuthuthukisa imiphumela yebhizinisi: Yenza abasebenzisi bakhokhele ama-tweets azenzakalelayo. O - sengiyakuzwa ukukhala manje, kepha ukube bekungabiza, bengizokhokha ukuze ngiphakamise eyami
Lokho Esikwenzile Ukwandisa Ukuzibandakanya ku-Twitter
NgoMsombuluko, Okthoba 27, 2014 NgeSonto, Okthoba 26, 2014 Douglas Karr
Kulo nyaka odlule, sisebenze kanzima sithuthukisa ukuzibandakanya kwethu ku-Twitter. Esikhundleni sokuphindaphinda izingxoxo kubhulogi yethu yezinkampani, i-ejensi yezentengiso, ubuchwepheshe bezokumaketha, nama-akhawunti womuntu siqu, ngigxile isu: Ngithathe umhlalaphansi kwi-akhawunti yokubloga yenkampani. Ukumaketha kokuqukethwe kugxile kuMartech ngakho kungani izilaleli zami zehlukane kanjalo? Abantu abasebenzisa ibhulogi yebhizinisi kufanele babe nokugxila okubanzi kokumaketha. Ngigxile ku-akhawunti yokukhangisa ekwabelaneni ngolwazi lomkhakha,